Noma imuphi umsebenzisi computer kungenzeka wazi ukuthi ngokuhamba kwesikhathi kokuba uyeke ukuhlangabezana ijubane ikhompyutha yakho. Umsebenzi ehlile kakhulu khona inani elikhulu kwezinhlelo okuqhubekayo ukulandwa amafayela. Ukubuyisela ijubane lakhe, ngezinye izikhathi kwanele ukuyihlanza, futhi ngenxa yalokhu awudingi yimuphi nolwazi olukhethekile. Okulandelayo uzofunda indlela yokuhlanza ikhompyutha yakho ongasebenzi ukwandisa isivinini yayo. Uzodinga ukukhumbula indlela ukuvula ebhukwini.
Into yokuqala okufanele niyenze ukususa amafayela amadala. Lapho disk hard iqukethe amafayela amaningi kakhulu ubudala, akulona neze emzimbeni bakwazi ukusebenza njengakuqala. Bheka ngokucophelela zonke lwemibhalo nge amafayela ubudala, bese ususa abathandekayo ungenalo ncamashi kudingeka. Uma ngandlela-thile scary ukuzisusa, ungadlulisa ukuba nedivayisi yangaphandle. Ngakho-ke ngeke kusadingeka ukufinyelela kuwo.
Uma siqhubeka ukukhuluma kanjani ikhompyutha yakho, okungukuthi ukuthi ungasusa uhlelo ubudala. Lokhu kungenziwa ngokusebenzisa inqubo khipha ejwayelekile. Running computer kuyoba isheshe, uma kutholakala kuphela lokho okusebenzisayo. Ebhokisini lengxoxo "Engeza noma Susa Izinhlelo" phambi kwakho lonke uhlu izinhlelo efakwe ukuba zithunyelwe. Lapha kungaba ahlungwe ngesikhathi ukusetshenziswa odlule. Ukukhetha uhlelo ezingadingekile, kumele sisuswe.
Nokho, indlela yokuhlanza ikhompyutha yakho, uma ungenawo ukususa amafayela esikhashana? Ukuze uthole iningi lazo, kumelwe ukhethe ukucinga wonke amafayela nge isandiso «.tmp». Uma betholakala khona, kufanele basuswe. Lokhu kungenziwa ngabanye, noma ungakhetha zonke futhi ususe ngokushesha.
Manje kwafika ithuba kubhasikidi. kubhasikidi lefundo ngokwako igcina amakhophi amafayela oyenze ukususwa. Uma unesithakazelo indlela yokuhlanza ikhompyutha yakho ngokuphelele, kuyafaneleka ukuthi yokuhlanza bhasikidi iphuzu elibaluleke kakhulu. Lokhu kwenziwa kakhulu ukumane. Kufanele uchofoze ngakwesokudla "Recycle Bin", bese kusuka kwimenyu yokuqukethwe ukhethe "Thulula Udoti". Ngokuvamile, ilebula itholakala ngqo kudeskithophu.
Ungahlola amaphutha disk uma iqhubeka, bese-ke kungavumela kahle kusheshiswe kukhompyutha yakho. Ukuze wenze lokhu, ukuvula ifolda "Computer yami" bese ukhetha "Properties" ku-pop-up kwavela disc imenyu C. Manje, ewindini elisha ukuvula ithebhu "Amathuluzi" bese "Hlola Disk" endaweni udinga chofoza "Hlola Manje." Kuyadingeka ukubeka imikhaza ezimbili izilungiselelo scan. Cishe, uhlelo Izokwazisa ukuqinisekisa ngesikhathi esilandelayo khompyutha waqala ngokuzenzakalelayo.
Defragment. Uma siqhubeka isihloko indlela yokuhlanza ikhompyutha yakho, okungukuthi ukuthi kwenzeka ukuthi omunye amafayela ayahlakazeka emikhakheni eyehlukene idrayivu kanzima, kodwa futhi kakhulu kubambezela ngesikhatsi operation uhlelo. It luqedwe uma senza hard disk defragmentation elenziwe kusukela ithebhu efanayo sokuhlola amaphutha. Njengoba uyobe ukhethe disc kuyadingeka ibhokisi lengxoxo bese uqala inqubo defragmentation.
Nokho, yinto yokugcina kuziwa indlela yokuhlanza ikhompyutha yakho - ukuhlanza lokubhalisa. Ubude yokusebenza isikhathi, kukhona namandla izinhlelo odla lokubhalisa kanye nemingcele ahlukahlukene ukhiye ukuze ifakwe. Ngosizo ezikhethekile Izinsiza ebhukwini zingase zihlanzwe izikhiye ubudala futhi engenamsebenzi. Kumele ugcine ikhophi yokugada ingozi ebhukwini, ngaphandle kwalokho kuzoba nzima ukubuyisela lonke uhlelo uma kukhona iphutha ngesikhathi wokuhlanza. Uma yonke into yenziwe kahle, kufanele kube yinkinga.
Ultraiso. Oqalisekayo flash drive: kanjani ukwakha
Kungenzeka kanjani ukuthi ngibe uzosula konke okuthunyelwe "-OpenID" kanye